အမျိုးသမီးထုကြားထဲက Hang Tag ဖက်ရှင်လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အမျိုးသမီးထုကြားထဲက Hang Tag ဖက်ရှင်လား
အမျိုးသမီးထုကြားထဲက Hang Tag ဖက်ရှင်လား
Posted by etone on Oct 24, 2011 in Short Story | 15 comments
အခုရက်ပိုင်း မြို့ထဲ သွားသွားလာလာလုပ်ရင်း ဘယ်သူက ထွင်လိုက်မှန်းမသိတဲ့ ဖက်ရှင်တမျိုးခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ် …. ။ ထွင်လိုက်တာလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် …ဖက်ရှင်ကျအောင်လုပ်တာလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် … ဒါပေမယ့် …. အတုမြင်အတတ်သင် အတုခိုးလွယ်တဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ အမျိုးသမီးထုကြားမှာတော့ … ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတာအမှန်ပါပဲ … အဲ့ဒါကတော့ …. hang tag လို့ခေါ်တဲ့ … အပြားလေးတွေ …. အိတ်တွေမှာ မဖြုတ်ပဲ အလှသဘောမျိုးတပ်ဆင်လာကြတာပါပဲ … ။ ရာဇာနေ၀င်း ခေတ်စားတုန်းက … အကျီ င်္တွေတံဆိပ်မဖြုတ်ပဲ ၀တ်ပြကြသလိုပေ့ါ … ။
hang tag ဆိုတာမျိုးက အ၀ိုင်းဖြစ်နိုင်သလို ၊ လေးထောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ..ဒါ့ပြင် မညီမညာ ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်နိုင်သလို … စာရွက်ခေါက်လေးလိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် … ဒီလိုပဲ … အသုံးပြုထားတဲ့ အသားကလည်း …ပလပ်စတစ်ပြားဖြစ်နိုင်သလို … သားရေပြားဖြစ်နိုင်တယ် … ကတ်ထူပြားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် … ဒီဇိုင်းကတော့ ဖန်တီးသူရဲ့ စိတ်ကူးထဲကအတိုင်းပါပဲ … ။ hang tag string ဆိုတာကတော့.. hang tag အပြားနဲ့ အိတ်နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုရတဲ့ ချည်နှောင်လို့ရတာမျိုးလေးပါ … ။ တချို့ကတော့ ပိုးကြိုးလေးတွေသုံးတယ် …တချို့က ဖဲကြိုးလေးတွေ .. တချို့က ရိုးရိုးနိုင်လွန်ကြိုးတွေ ..တချို့ကတော့ loop pin လို့ခေါ်တဲ့ ပလက်စတစ် ကြိုးလေးတွေသုံးပြီး ချိတ်တွဲကြတယ် … ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ အသုံးပြုတဲ့ hang tag ဒီဇိုင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံအမျိုးမျိုးကွာခြားတယ် …တစ်ခါတစ်လေ … hang tag လေးတွေဟာ … အလှတပ်တဲ့ ကီးချိန်းလေးတွေထက် ပိုလို့တောင် လှနေပါသေးတယ် …
Hang tag လေးတွေ ဘာလို့ချိတ်ဆွဲတာလဲလို့ .. သိကောင်းသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်နော် …. ။ တစ်ချို့ကတော့ … ကုန်ပစ္စည်းအာမခံချက်လေးတွေရေးတယ် … တချို့ကအသုံးပြုထားတဲ့ အဓိက ပိတ်စ ၊လယ်သာ composition လေးတွေရေးတယ် … (တစ်ချို့လူတွေ ဓါတ်မတည့်သူတွေရှိတတ်လို့) (ဒီနိုင်ငံမှာတော့.. အထွေထူး သိပ်မကြည့်တတ်ကြပါဘူး … အိတ်လှတာကိုပဲ ရွှေးဝယ်ကြပါတယ် ) … တချို့ကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လိပ်စာလေးတွေရေးတယ် .. ။ ၀က်ဖ်ဆိုက်နံမယ်တွေရေးတယ် …စသဖြင့် ….. သုံးချင်သလို သုံး ၊ ဖော်ပြချင်သလို ဖော်ပြထားပါတယ် …. ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာတော့ …. hang tag တွေဟာ အဓိက မကျပေမယ့် … တခြားနိုင်ငံတွေမှာ … export လုပ်တဲ့အခါ … hang tag ပေါ်က description လေးတွေက အကျုံးဝင် အရေးကြီးနေတတ်လို့ အိတ်တိုင်းမှာ hang tag မပါမဖြစ်သုံးပေးကြတာပါ … ။၀ယ်ယူသူက အိတ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ …. tag လေးတွေကိုဖြုတ်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ရုံပါ … ။
လှတပတ ..တွဲလောင်းလေးတွေနဲ့ လူကြားထဲ ခဏခဏမြင်မိလို့ ကျွန်မတို့ မျက်စိယဉ်သွားပေမယ့် … တခြားလူမျိုးတွေသာ မြင်လျှင် … ၀ါးလုံးကွဲ အော်မရယ်မိလျှင်တောင်မှ … ပြုံးမိကြမှာပါ …. ။ hang tag ဆိုတာ အလှဆင် ပစ္စည်းအမျိုးစားထဲက မဟုတ်လို့ပါပဲ … ။ တကိုယ်လုံးတော့ ကြွရွနေအောင် ၀တ်ထားပေမယ့် … ဖက်ရှင်မဟုတ်တာကြီးကို ဖက်ရှင်လုပ်နေမိတယ်ဆိုတာ သတိထားဆင်ခြင်မိဖို့ပါပဲ …. ။ သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် … အိတ်အသစ်ဝယ်တာ ကြွားချင်လို့ မဖြုတ်ရက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် …. ဖက်ရှင်ဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် … မိမိအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ် … ။ သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာထက် …. ပစ္စည်းမှန် နေရာမှန် အသုံးပြုသင့်တာကသာ ပိုအရေးကြီးပါကြောင်း ဒီပို့စ်လေးနဲ့အတူ သက်သေထူလိုက်ပါတယ် ။ ။
မေကြီးရဲ့ ကန်တော့ခံ အိတ်လေး ... hang tag မဖြုတ်ရသေးတာနဲ့ ... နမူနာပြဖို့ ရိုက်တင်ပေးလိုက်တာပါ ... တော်သေးတယ် အိတ်သစ်လေးတွေ့လို့ ..မတွေ့လျှင် ရှော့ပင်းစင်တာတစ်ခုခုကိုသွားပြီး ... အိတ်တလုံးကို နမူနာရိုက်ပြမလို့ တွေးနေတာ ...။
” ပြန်ရောင်းတဲ့အခါ အစဉ်ပြေအောင်လို့ပါ…။”
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကတော့ Ruby Mark သွားရင်း
စိတ်ထဲ တွေ့နေကျမဟုတ်တော့ သေသေချာချာကြည့်မိလိုက်သလို
ဘေးနားကပါတဲ့ တစ်ယောက်သောသူကိုတောင် လက်တို့ပြီး
ဖက်ရှင်မဟုတ်တာကို အတုယူမှားလာတာပါပဲ နွယ်ပင်ရေ … ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး … မြင်မိတော့ပြုံးမိလို့ ရေးမိသွားတာ
ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်တပ်တာ ကြိုက်သလိုတပ်လို့ရပါတယ်လေ …
အမှန်ကတော့ ကြွားခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည် ဟု ယူဆမိပါသည်
မမတုံလည်း အပြင်ထွက်ရင် မေကြီး အိတ်ကို ခိုးမလွယ်ခဲ့မိစေနဲ့နော်
ဟုတ်တယ် etone ရေ .. အခုနောက်ပိုင်း ဘယ်သူကထွင်လိုက်မှန်းမသိဘူး .. ဖက်ရှင်လိုလို တမင်ကြွားချင်တာလိုလိုနဲ့ အများအားဖြင့် (အသက်ကြီးပိုင်းထဲက အမျိုးသမီးတွေ) အိတ်က hang tag တွေကို မဖြုတ်ဘဲ ကိုင်ကြတာ နေရာအနှံ့မှာ တွေ့နေရတယ် …။ အရင်ကတော့ အထူးအဆန်းဆိုပြီး လိုက်ကြည့်မိတယ် .. အခုတော့ မြင်ရဖန်များလို့ ရိုးသွားပြီ ….
ဒေါ်ချစ်လေးတွေ့ဖူးတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတွေက နှမျောလို့နေမှာပေါ့
ကျုပ်တွေ့ဖူးတာကတော့ ကောင်မလေး ငယ်ငယ်လေးတွေပါ … ဖလမ်းဖလမ်းထတဲ့ အရွယ်လေ
ဈေးနှုန်းကပ်ထားတဲ့ အိတ်ကြီး လွယ်ထားရင်
ဥပမာ ၃၀၀၀၀ ကျပ် ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကပ်ပြီး လျှောက်သွားနေတုန်း
ဈေးလျှော့ပါဦး လို့ လာပြောရင် ဒုက္ခနော
ပြန်ရောင်းချင်နေတဲ့ လူနဲ့တိုးနေမှ တကယ်လျှော့ရောင်းနေလို့ ပြန်ပြေးနေရမယ်နော
ဒီမှာတော့..အဲဒီ တက်ဂ်တွဲလောင်းနဲ့ဆို.. ရီတန်းပြန်လုပ်လို့ရတာမို့.. ကိုယ် အကြံအဖန်လုပ်တာ.. လူသိသာနေမှာပေါ့…။
တကယ်မကြိုက်လို့ ရီတန်းလုပ်မှာမဟုတ်ပဲ.. အကြံအဖန်နဲ့ စတိုးဆိုင်ပစ္စည်းယူဝတ်နေတဲ့ ပုံဖြစ်နေတာမို့… သူများပစ္စည်း အလွဲသုံးစားလုပ်နေသူလို .. မြင်ကြမှာပါ..။
နေရင်းထိုင်ရင်း.. သိက္ခာထိသွားမယ် ထင်ပါကြောင်း..။
ဒီမှာက သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာ … အဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတာတောင် သေချာမသိတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ် … ရှက်ရကောင်းမှန်းလည်း သိမယ်မထင်ပါဘူး
စတားဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး … အဲ့လိုလူတွေမြင်လျှင် ရယ်ချင်နေမိတယ်
ကိုပေကတော. သူများမတွေးတဲ့ နေရာကနေ ၀င်တွေးလိုက်ပြန်ပြိ တော်တယ်နော်